प्रकाशित मिति २४ बैशाख २०७६, मंगलवार १४:०१ लेखक nepali janta
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लौकही–झुम्का सडक निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गर्दै
सुनसरी। पप्पु कन्ट्रक्सनले बनाइरहेको सडकमा कमसल सामाग्री प्रयोग गरेको भन्दै बराहक्षेत्रका सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । एसियाली विकास बैंकको…
मालपोतका तत्कालिन अधिकृतलाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश
काठमाडौं । ललिता निवास निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालिन शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई थुनामा पठाएको…
गोरखा दरबार पुनर्निर्माण फेरि रोकियो, काठकाे अभाव
गोरखा । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको ऐतिहासिक गोरखा दरबारको पुनर्निर्माण फेरि रोकिएको छ । काठको अभाव देखाउँदै ठेकेदार कम्पनीले गएको…
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विपरित सिभिल होमले काम गर्दै आएको खुलेपछि सिभिल बैंक र सिटिसी मलका सञ्चालक…
आज बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद बैठक यसकारण स्थगित, यस्ता छन सर्नुका कारणहरु !
काठमाडौं । आज बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद बैठक स्थगित् भएको छ । आजको…
‘खानेपानी सहज वितरणको लागि भिडियो बैठक’ 369 views
काठमाडौं क्षेत्र नं १ का प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठको भिडियो सर्वाजनिक, काठमाडौंका जनताले खानेपानी पाएन ? 15 views